IFirefox 10.0 1eta XNUMX Iyatholakala | Kusuka kuLinux
I-Firefox 10.0 ne-1 Iyatholakala
Via IMozilla Sithola izindaba zokuthi inguqulo isivele isiyatholakala 10.0 Isilinganiso 1 de I-Mozilla Firefox okubandakanya (phakathi kwabanye) izindaba ezilandelayo.
Inkinobho yokudlulisela ifihliwe, kuze kusetshenziswe inkinobho yokubuyela emuva futhi.
Ukuxhaswa kwe-Anti-Aliasing kwe-WebGL.
Ama-API Esikrini Esigcwele akuvumela ukuthi usebenzise uhlelo lokusebenza leWeb kusikrini esigcwele.
Ukusekelwa kwe-CSS3 3D-Transforms.
Isici se-HTML5 nempahla yeCSS.
Kungezwe isihloli sesitayela seCSS.
Kulungiswe izingqinamba ezinhlobonhlobo zokuzinza.
Okuningi imininingwane nokulandwayo ku Isithangami seMozilla.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Firefox 10.0 ne-1 Iyatholakala
I-WTF? uma izolo nje faka i-firefox 9> :(
kuze kube yizinsuku ezimbalwa ezedlule ngibe nenguqulo 4.0 xDDDD
Kuleli zinga sizoba ne-firefox 20 kungekudala, ubuwula kangakanani. Eminyakeni eminingi yobukhona be-firefox yayihamba nge-firefox 3 noma i-4 futhi ngonyaka omncane cishe. kakade ngo-9.
Izinyathelo ezingenangqondo kimi zokuzama ukungalahleki ngomncintiswano, ukubona ukuthi kungani inguqulo yesiphequluli kufanele ibaluleke kangaka kubasebenzisi bayo. Ngaphandle kwalokhu nalokhu abenzi lutho ngaphandle kokugoqa abadali bezandiso ngezinguquko eziningi kakhulu zenguqulo, ukuthi benza umsebenzi wabo ngaphandle kokubiza noma yini (ngaphandle kweminikelo) futhi okusiza ukukhulisa kakhulu isiphequluli.
Kuzozwakala kubi kakhulu ukuba ne-firefox 20, akumangazi ukuthi bacabanga ukuthi inombolo yenguqulo yesiphequluli ayikwazi ukubonwa, ngendlela, into ephikisana nalokho abakwenzayo manje.
Ngiyavuma ngokuphelele, ikakhulukazi endabeni yabadali bezandiso, bangabantu abathathe iFirefox bayiyisa lapho ikhona (ngoba kufanele siyivume, iFirefox engenazo izandiso ifana nephathi engenabantu), ngabantu yenze ukuthi iFirefox iqhubeke nokuba nabasebenzisi enabo, ikakhulukazi ngenxa yezinkathi ezimbi ezimbi zesiphequluli (ngoba ngubani ongakaze acabange ukubalekela ukwethuka kweFirefox futhi uboshwe izandiso eziphonsa itshe lokuqala) nangaphezulu bonke bangabantu abasebenza ngokuzithandela bengatholi mbuyiselo futhi bagconwa ngaleyo ndlela kube sengathi bathola izigidi ezingama-300 minyaka yonke ngenxa yokuphila ngegama. Ngokuphambene nalokho, ngokombono wami kunalokho "bayathukwa" ngoba ngoshintsho lwezinombolo babephathwa sengathi babenzela umusa, ngabona izinto ezinjengokuthi “ake sibheke ukuthi bayakhombisa yini ukufisa futhi bavuselele izandiso zabo kaningi, ngoba abaningi bachitha isikhathi futhi kuze kube unyaka ngaphandle kokubuyekeza ¿? ».
Okungenani kunephrojekthi eyodwa (hhayi eyeluliwe) eyekile ukuhambisana neFirefox versionitis futhi ngiyibonile ime izinyanga ezimbalwa nokuthi angikuthandi ukuthi ife.